Mhlekazi Bw Wai: Njani Unako ndiya Kuhlangana Guys kwi-China. WWAM-Bam
Wamkelekile Bw Wai s ingcebiso umhlathi. I-world of Western abafazi dating Isitshayina abantu kusenokuba fraught kunye nempixano, misunderstandings kwaye iingxaki. Kodwa Bw Wai sele onayo kufuneka igqunywe. Ukuba unayo umbuzo okanye kufuneka abanye ngqo-phezulu kubekho inkqubela thetha, Bw Wai ngu apha ukulungiselela wena kunye rhoqo ingcebiso umhlathi. Nceda thumela nayiphi na imibuzo ku-imeyili sikhuselwe. Heee Luckless, mna ve uhleli apho, ndikuvayo yam. Ngobunye ubusuku mna wachitha iiyure dancing kwi-jikelele icala, ngoko ke dancing jikelele, super-zinokuphathwa guy. Mna agcina ukuzama ngokukhawuleza wam ncuma, babambisa yakhe iliso mhlawumbi thatha isithuba kwaye qalisa a incoko. Kodwa akukho nto eyenzekileyo. Xa wayeneminyaka ngokuqinisekileyo ngobukho wam bukho kwaye yangqungqa kufutshane nam kunye umzimba wakhe, waba kakhulu ukuba neentloni ukuba nkqu ukwenza iliso uqhagamshelane. Ekubeni langaphandle umfazi ukuzama umhla kwi-China kusenokuba ngumsebenzi frustrating prospect. Zonke”myths”langaphandle abafazi kwenzakalisa kwethu kwi-dating icandelo lomboniso. Abo myths.”Langaphandle abafazi kuphela umhla otyebileyo guys.”Langaphandle abafazi ingaba nzima ukuba yanelisa.”Langaphandle abafazi kuphela njenge abavela kumazwe angaphandle amadoda.”Langaphandle umfazi ingaba zange umhla kum, ubuzwe Isitshayina guy.”Mna anayithathela waziva zonke ezi, phakathi kwezinye izinto, countless phambi phinda-phinda. Kanye, xa ndabaxelela wam abafundi ndandisele dating a guy ukuba isebenza ngaphandle zethu esikolweni, kodwa mna wouldn khange ndithi abo, bathi joked baba ke ukuthatha wam umboniso kwaye yiya jikelele kwi-store ukugcina kunye wam umboniso kwaye ucele boss,”lento yakho girlfriend.Ngenxa yokuba izinto a foreigner. Ngaba nento yokuba zange umhla ezenzeka lwabasebenzi basefama,”kokuba uphendule ngathi mna waba idiot kuba engazi kakuhle lonto. (Jokes kwi kwabo, wayeyindoda lowly™.) Ngoko ke, ukongeza kumsebenzi wezandla kwaye ulwimi iingxaki, siya kuba perception ingxaki. Baya zinzima imiqobo okokuba kodwa musa ukoyika, Aunty Wai ngu apha ukunceda wena. Kukho into enye, kwaye into enye kuphela ukuba unako ukunceda kuthabatha dating umdlalo elandelayo inqanaba. Oku ngenene i-easiest kwaye uninzi ngqo indlela ukuyenza, kwaye uninzi ngokufanayo indlela yam impumelelo. Apps nika guys i-inkululeko indlela wena kunye anonymity ukukhusela zabo ikratshi. Nawe kanjalo qala unxibelelwano nge-bhala, ngoko ke, kuxhomekeke kwizicwangciso zakho Isitshayina ulwimi izakhono zabo isixhosa izakhono, bona, okanye kuni, unako ukusebenzisa ifowuni yakho s magama ukuba zithungelana lula. Kwaye njengokuba Westerner ngomhla omnye Isitshayina apps, uzakufumana ezininzi ingqalelo. Ukuba ngokwayo ngu-a real ego kukhuthaza. Antenatal ingaba Isitshayina Tinder (English version ikhona). Ngu swipe app, ekhohlo kuba hayi, akunjalo kuba ewe kwaye elula (kwaye unxweme) njengoko kusenokuba. Ungabona ezincinane inkangeleko, kuquka ezininzi imifanekiso (ukuba babe esimdibanisa nomnye u-it), babo umgama ngokunxulumene nani (km, hayi ukuthelekisa iidilesi okanye nantoni na) kunye lokugqibela baba kwi-app. Ukuba ufuna zombini”njenge”ngamnye enye, voilaquery. Ungaqala chatting.
Ngexesha girls bakholisa ukuba IIND yabo yomtshato ukujonga ngcono, guys bakholisa ukusebenzisa kunoko nemifanekiso ka-ngokwabo. Qiniseka ukuba buza kwabo kuqala ukuba zabo umboniso ngu kwabo (ewe, usebenzisa iibhonasi imifanekiso kuxhaphakile kakhulu), emva koko cela ukuba bayagwetywa nje pics. Trust kwam kule omnye, abantwana. Jikelele, xa kufuneka ahlangane a guy okokuqala, uya kuba kancinci ngaphantsi iinwele kwaye kungentsuku umbimbi kwaye unit-format kunokuba yakhe inkangeleko imifanekiso. Momo zenza okungakumbi”classic”dating app ukuzothi ga kwaye kwakukho omnye yokuqala enkulu okkt. Momo ingu enkulu, kwaye enye ezimbalwa Isitshayina app iinkampani ezidweliswe kwi-NYSE, nangona ezinye isizathu sokuba babe phased ngaphandle zabo isixhosa inguqulelo app ngonyaka edlulileyo, ngoko ke ufumana ngcono ezaziwayo ezisisiseko Isitshayina ukusebenzisa esi sinye. Ke ngakumbi eziqhelekileyo, akukho swiping ewe okanye hayi, kodwa nangona kunjalo eliqhelekileyo imifanekiso kwaye inkangeleko nto. Momo wenziwe ukongeza imisebenzi kuba ngexesha kwaye uzama kuba ngaphezu kwe-loluntu media app kunokuba nje dating app. Baya kuba amaqela uyakwazi ukungena ukuhlangabezana abantu kwaye mna kutshanje, weva ngabo umnikelo kuphila iyaphephezela (nangona mna akhange na kusetyenziswa loo msebenzi). Kukho izigidi kule app, ngoko ke ufumana shouldn ukuba iqhube ngaphandle iinketho. (Nangona ndicinga nowadays, ngakumbi abantu kabini ukuthi nkxu, esebenzisa omabini Momo kwaye Tanta yithi rhoqo.) WeChat Ewe, nkqu yakho oyintanda WeChat kungasinceda ufumane i-nca. Nje sebenzisa i”abantu abakufutshane”umsebenzi (ingakumbi okulungileyo xa ufaka travelling kwenye indawo). Kodwa kuba careful kunye lena. Ngexesha Tanta uya kubonisa abantu libanzi mmandla (enye guy iya kuba km kude, elandelayo iza kuba km ke, wesithathu uza kuba km ke, njalo-njalo.), WeChat iqala closest kuwe kwaye uyaya chu ngaphandle. Ngoko ke, ukuba ungummi college utitshala, baze baphile kwi campus, le asiyiyo eyona ndlela kuba kuni. Ezininzi abafundi baya kubona wena, kusenokwenzeka ukuba nkqu ezizezenu. Abo bamele nje ezintathu, kodwa ezintathu le”big guns”, ngoko sebenzisa olu lwazi kakuhle. Njengoko Western abafazi, unoxanduva ke kufuneka ibe kancinci ngakumbi phambili, jikelele, kunokuba ubuya kunye guys emva ekhaya. Ndiyazi, ke ngokuqhelekileyo the guy lonto yenza lokuqala ukusa, kodwa kwi-China, kuza kufuneka ukuba abe kancinci brave ekwenzeni yakho intentions gca. Nkqu ukuba ufaka phezu phezulu flirting ungalahla kancinci mna-ukukholosa ngenxa uziva ngathi ngu hayi ke reciprocated. Ixesha elininzi the guy seriously ayina unye. Abo bacinga ukuba wena, okhethekileyo butterfly, ingaba zange ngathi nje”okuqhelekileyo”guy njenge kwabo, ngoko ke baya musa chonga phezulu na isihindi nisolko zinika kwabo. I dating ihlabathi kwi-China ayonto okulungileyo ndawo subtlety. Sebenzisa yakho isibindi.
Kuphela mba nge-e
g. Tanta ngu kwezo meko ulwimi barrier, isinika ntoni wenziwe ingxaki kuba bahlobo bam nkqu ukuba ngu, KULUNGILE ukuba incoko, xa kanye intlanganiso kwi umntu kokuba wenziwe kancinci awkward ukusukela baya ayisasebenzi ayikwazi zithungelana kakuhle kakhulu icebiso Lam kuhlangana abahlali izakuba ukufumana abakwicandelo non-expat izangqa, ukuya iziganeko kwaye imisebenzi ezingekho kujoliswe expats ngokukodwa. Ukuba unokwazi kuhlangana abantu abaphila efanayo umdla njengoko ngokwakho, kwi Tanta mhlawumbi kufuneka bedlule iselwa ezininzi nganye-nganye. Wam Isitshayina umhlobo wandithatha ukuya oluzinzileyo ukutya msitho, ezele abahlali anomdla efanayo iindlela zobomi njengoko ndandicinga. Ukuba apho mna bumped ngaphakathi kindest ukhangela umntu ngonaphakade, ifumene yakhe WeChat, kwaye ngoku silindele ve sele dating kuba phezu ngonyaka. WeChat wenziwe crucial ukuba budlelwane bethu nangona kwaba kuphela indlela kuthi ukuthetha, bazalwana Isitshayina absolutely sucked ngexesha
← Indlela kuhlangana Isitshayina girls - Ividiyo Dating
Jonga kwi Isitshayina Inkcubeko kunye Dating Lovelorn →